Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii xubnaha Jaaliyadda Norway oo Guul ku dhamaaday
Shirkii xubnaha Jaaliyadda Norway oo Guul ku dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ March 25, 2012
Oslo- Waxaa xafiiska Jaaliyadda Somalida Ogadeenya ee dalka Norway, galabta lagu soo gaba-gabeeyey shirkii xubnaha Jaaliyadda Soomaalida Ogadenya oo bishiiba hal mar la qabto. Kulankan oo ahaa kii labadaad ee xubnaha iyo Maamulka Jaaliyadu yeeshaan mudo bil gudaheed ah, ayaa waxaa ka soo qaygalay xubnaha Jaaliyadda Soomaalidda Ogadenya ee dalka Norway.
Shirkan oo qodobo muhiim ah ay horyaaleen ayaa waxa ugu horayntiiba Aayado kamid ah Qur’aanka kariimka ah ku furay Sheekh Abdi. W. Garaad. Intaas kadib, ayuu gudoomiyaha jaaliyadda S.Ogadeenya ee Norway Mudane Abdirahman Sheikh Yusuf shirkii si guud u furay isagoo xubanaha u qeybiyey Ajendayaasha shirka looga hadli doono.
Arimaha ay maamulka Jaaliyadda xubnaha soo hordhigeen ayaa waxaa ka mid ahaa waxqabadkii saddexdii bilood ee tagay iyo hawlaha abaabul ee Jaaliyadu ay qabatay bilihii la soo dhaafay, haday ahaan lahayd xagga siyaasadda, fulinta qorsho-hawleedyadda abaabulka, isku-xidhka bulshadda iyo waliba garab istaagista qadiyadda shacabka Ogadenia ee ku hoos jira gumeysiga Woyaanaha.
Shirka oo si mug leh loogu falan qeeyay ajenda-yaashii horyaalaya ayaa ku dhamaaday guul iyo is-afgarad oo dhamaan qodobadii lasoo jeediyey lagu go’aansaday, waxana la isla gartay in lasii xoojiyo dadaaladda dhinac kasta leh ee lagu xaqiijinayo midnimadda iyo wax u qabashadda shacabka Ogadenya.